महिला फोरम सदस्यहरूमा सविता बर्तौला, रश्मि झा, मनीषा शर्मा, जुना ज्ञवाली, डा. करुणा राई, डा. कृषिता राजलावत, रक्षा संग्रौला र सेरिका सापकोटा कँडेल छन्। अमृता थापा (कञ्चन) र खुश्बू अग्रवाल सल्लाहकार चुनिएका छन्।
संयोजक आचार्यले 'युनाइट वुमेन टु ब्रिङ अ चेन्ज' नारासहित गठन भएको फोरमले चीनमा रहेका नेपाली महिलालाई एकजुट गराई नेपालमा महिला उद्यमको विकाससँगै शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिइन्। एनआरएनए चीनका अध्यक्ष झाले आफूहरूले नेपाली महिलाको आङ खस्ने समस्या समाधानका क्षेत्रमा पहिलेदेखि काम गर्दै आएको स्मरण गरे।
कार्यक्रममा उपाध्यक्ष प्रदीप न्यौपाने, महासचिव सुशील बेल्वासे, फोरम सल्लाहकार खुश्बू अग्रवाल, विष्णुहरि भण्डारीले पनि बोलेका थिए। कार्यक्रममा एनआरएन हङकङकी अध्यक्ष टीका गुरुङ, एनआरएन मकाउकी अध्यक्ष शान्तिदेवी अधिकारी एवं ग्वान्जाउस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासबाट रक्षा पोखरेल पनि उपस्थित थिए।
वार्ताका क्रममा नेपाल र फ्रान्सबीच कूटनीतिक सम्बन्ध भएको ७० औं वर्ष भएकाले दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझै विस्तार गर्ने र आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहकार्यका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। लामो समयपछि नेपालमा स्थिर सरकार रहेको, संविधान बनेको र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा सरकार प्रतिवद्ध रहेकाले फ्रान्सेलीहरुलाई नेपालमा लगानीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गर्ने छन्।
दुई समकक्षीबीचको वार्तापछि प्रधानमन्त्री ओली बिहिबार साँझ नै राष्ट्रिय सभामा मैत्री समूहको अध्यक्ष भेरोनिक रिओतों र राष्ट्रिय सभाले आयोजना गर्ने रात्रीभोजमा सहभागी हुने छन्। रात्रीभोजकै क्रममा नेपाल र फ्रान्सको संसदीय मैत्री संघका बीच के कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने छ। ओलीले फ्रान्सेली संसदीय टोलीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिने छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार दिउँसो बेलायतको लण्डनबाट सार्वजनिक रेल चढेर पेरिस आउने कार्यक्रम रहेको छ। विमानबाट आउँदा विमानस्थलमा लामो समय लाग्ने भएकाले छिटो यात्राकालागि रेलबाट आउन लागेको राजदूत दिपक अधिकारीले बताए।
पेरिस आए लगत्तै यहाँको उद्योग वाणिज्य महासंघ (मुभमँ देजँथरफ्रिज द फँस) का अधिकारीहरुसित संयुक्त लगानीका विषयमा छलफल हुँदै छ। नेपालमा लगानीकालागि उपयुक्त वातावरण बनेकाले फ्रान्सेली उध्योगी व्यवसायीहरुलाई लगानीकालागि आस्वस्त पार्ने जानकारी फ्रान्सकालागि नेपाली राजदूत दिपक अधिकारीले दिए।
लगानीका विषयमा अहिले नै सम्झौता हुने स्पष्ट नभएपनि हालको वार्ताबाट उपयुक्त विषयमा छलफल गरी भविष्यमा संयुक्त लगानीकालागि योजना बन्न सक्ने अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए।
बिहिबार उनले पेरिसस्थित नेपाली व्यवसायीहरुसित भेटघाट गरी नेपालमा लगानीकालागि आव्हान गर्नेछन्। प्रवासी नेपालीहरुलाई लगानीकालागि आव्हान गरेपनि लगानीको लागि सुरक्षित वातावरण नबनेको भन्दै त्यसमा प्रधानान्त्रीका तर्फबाट निस्चित गर्नुपर्ने माग राखिने नेपाली व्यवसायीहरुको नेतृत्व गरेका कमल अधिकारीले बताए।
व्यापारीहरुसितको भेटघाटपछि दिउँसो २ः४० बाट नेपाली र नेपाललाई माया गर्ने फ्रान्सेलीहरुका बीच प्रधानमन्त्रीको अन्तक्रिया कार्यक्रम राखिएको छ।
बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फ्रान्सको हिमाली क्षेत्र सामोनीकालागि प्रस्थान गर्ने छन्। युरोपको सबैभन्दा अग्लो हिमाल मो ब्लाँ (४८१० मिटर) रहेको यो क्षेत्रमा नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने, नेपालमा अनुसन्धान र विभिन्न संस्थामार्फत सहयोग लैजाने फ्रान्सेलीहरु धेरै भएकाले प्रधनान्त्रीले त्यहाँका फ्रान्सेलीहरुसित भेटघाट गर्न चाहेको जानकारी पनि राजदूत अधिकारीले दिए।